July 2016 – Myanmar Home & Decor Magazine Official Website
195439 Views so far
July 1, 2016 နေ့
ဆရာဝန်တစ်ယောက် ဆေးထိုးမှားရင် လူအသက် တစ်ချောင်းပဲ ဆုံးရူံးမှာ။
အာခီတက် (ဗိသုကာ) တစ်ယောက် “ဒီဇိုင်း” မကောင်းရင် တစ်အိမ်၊ တစ်ရပ်တစ်ရွာ၊
တစ်မြို့တစ်ရာလောက်တော့ သွားရော။ စတီရီယို အာခီတက်ချာ
ဆရာဝန်တစ်ယောက် ဆေးထိုးမှားရင် လူအသက် တစ်ချောင်းပဲ ဆုံးရူံးမှာ။ အာခီတက်(ဗိသုကာ) တစ်ယောက် “ဒီဇိုင်း” မကောင်းရင် တစ်အိမ်၊ တစ်ရပ်တစ်ရွာ၊ တစ်မြို့တစ်ရာလောက်တော့ သွားရော။
စတီရီယိုတေး တေးဂီတတွင် (အရပ်အခေါ်) မိုနိုနှင့် စတီရီယို နှစ်ပိုင်းတွေ့ရ။ ရေဒီယိုတေးကို“မိုနို”၊ ကော်ပီ (အများစု) တေးကို စတီရီယို၊ ကနေ့ မိုနို၊ စတီရီယို သိပ်မကွဲတော့၊ စတီရီယိုတေးတွေ ရေဒီယိုထဲဝင်လာ။ မိုနိုတေးတွေ စတီရီယိုထဲ ရောက်သွား၊ တေးသီချင်းဟာ တေးသီချင်း သဘောပါပဲ။ အင်္ဂလိပ်၊ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ထိုင်း၊ မလေး . . .တေးတွေထဲ မြန်မာစကားလုံး ထည့်ဆိုတာ ဆယ်စုနှစ်ခု ကျော်ခဲ့ပေါ့။ အဲဒါ“စတီရီယိုတေး”ခေါ်၊ သံစဉ်က နိုင်ငံခြားဖြစ် စကားလုံးက မြန်မာဖြစ်၊ ကော်ပီတေး၊ မိတ္တူတေးပေါ့။
ဗိသုကာပညာ၊ ဗိသုကာလက်ရာ၊ ဗိသုကာလက်ရာဟန်တို့ကို အာခီတက်ချာ(Architecture)လို့ခေါ်ပေါ့။ ရေခြားမြေခြား“အာခီတက်ချာ” တွေ အလုံးအရင်နဲ့တို့ဆီလာကြ၊ ကော်ပီကူး၊ မိတ္တူကူးကြနဲ့ “စတီရီယိုတေး” သဘောပါပဲ။ အဲဒါ“စတီရီယို အာခီတက်ချာ” လို့ ငါနာမည်သစ် ပေးကြည့်မိ။
“စတီရီယို အာခီတက်ချာ” ကို ခွဲစိတ်ကြည့်လိုက်ရင်
(၁) မြန်မာအသုံး (Function)
(၂) မြန်မာဒီဇိုင်းပုံစံ (Form)
(၃) နိုင်ငံခြားအသုံး (Function)
နိုင်ငံခြားဒီဇိုင်းပုံစံ (Form) . . . ဆိုပြီး သုံးမျိုးသုံးစား တွေ့ရ။
ဗိသုကာ လက်ရာဆိုတာ တစ်ခါတလေ “အနုပညာလက်ရာ”တစ်ခုဖြစ်တယ်။ အိနိ္ဒယက ကမ္ဘာကျော် “တပ်ချ်မဟာ” ဟာ အနုပညာ လက်ရာမွန်တစ်ခုပဲ။ ပန်းချီကားတစ်ချပ်လို ပန်းပုရုပ်ထု တစ်ခုလို . . .ရိုးသားမှုရဲ့အလှတရား ရှိသင့်တယ်။
ငါ . . .“ဗိသုကာ”ဖြစ်ခဲ့တာ တစ်ဆယ့်ငါးနှစ် တင်းတင်းပြည့်ပေါ့။ ငါ့ရဲ့ဗိသုကာလက်ရာ “ကလေး” တွေတောင် အပျို၊ လူပျိုဖားဖားကြီး ဖြစ်နေပြီ။ “ဗိသုကာ” လုပ်ဖို့ ထမင်းစားချင်ပေမယ့် ထမင်းစားဖို့ “ဗိသုကာ” လုပ်နေရ၊ ဒေါ်လာ၊ အသပြာ၊ ပိုက်ဆံ၊ F.E.C ငွေကြေး “ဗိသုကာအရေးထက် ဝမ်းရေးခက်၏” တဲ့ ။ လုပ်ခဲ့ရတာ၊ လုပ်နေတာ၊ လုပ်ချင်နေတာ၊ လုပ်သင့်တာ၊ လုပ်ရဦးမှာ . . .ဒါတွေ ငါ့မှာထွေပြားနေပြီပေါ။ ငါ့ရဲ့ဗိသုကာ လက်ရာတွေမှာ ရိုးသားမှု၊ မရိုးသားမှုတွေ ရှိခဲ့ပေါ့ “စတီရီယို အာခီတက်ချာတွေလည်း လုပ်ပေးခဲ့ရပေါ့ . . .။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ “တပ်ချ်မဟာ”လို ချစ်သူအတွက် ဗိမာန်လှလှလေးတစ်ခု ပြုစုချင်သေးရဲ့။ ငါ . . . မရှိတော့တဲ့အခါ ငါ့ရဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေက ဒီပလာဇာကြီးကို တို့အဖေဆောက်ခဲ့တာ . . . ဒီဟိုတယ်ကြီးက တို့အဘိုး ဆောက်ခဲ့တာ . . .ပေါ့လို့ လူပုံလယ် ကြွားစရာလေးတွေတော့ ထားခဲ့ချင်သေးရဲ့။
၁၉၉ရ ခုနှစ် မိုးဦးကာလ၊ “အိမ်ရာစီမံကိန်းလုပ်ဖို့ အကြောင်းဖန်လာတယ်။ အပ်နှံသူ (Client) က ရမ္မာဝတီကုမ္ပဏီ စီမံကိန်းနာမည်က River View Housing Project တောင်ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့သစ်၊ တခြား အာခီတက် အဖွဲ့ရဲ့လက်စ . . .။“ဒီအဖွဲ့နဲ့ ဘာကြောင့် ဆက်မလုပ်တာလဲ” တွေးမိတယ်။ ငါ့ကိစ္စမဟုတ်၊ မေးရန်မလို စီမံကိန်းတစ်ခုလုံး ပန္နက်ပုံ ပြန်တိုင်းထွာ မလိုတာဖြုတ်၊ လိုတာဖြည့်၊ ပုံစံသစ်ရေးဆွဲ၊ အိမ်ရာလုံးချင်း၊ နှစ်လုံးတွဲ။ လေးလုံးတွဲ ပုံစံသစ်ရေးဆွဲရန်၊ အဆိုပြု ပုံစံသစ်အားလုံး ရက်တိုတိုနဲ့ပြီးဖို့မလွယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် Home Buyter’s Guide စာအုပ်တွေ၊ ငါ့စာအုပ်စင်မှာ အစီအရီပေါ့။ ထိုင်းဘာသာစကားနဲ့. . .။ ဗိသုကာရပ်ဆိုင်ရာ ဆွဲပုံတွေတော့မပါ။ သီဝရီဘာတွေလည်း မပါဘူးထင်ရဲ့။ အခန်း၊ အိမ်၊ ကွန်ဒို Apartment ဝယ်ချင်သူတွေအတွက် ကြော်ငြာမဂ္ဂဇင်းသဘော၊ ရောင်စုံဓာတ်ပုံတွေ၊ သုံးဘက်မြင် ရောင်စုံဆွဲပုံတွေနဲ့ ဝေဝေဆာဆာ၊ နေချင့်စဖွယ်ပေါ့။
Client (လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ) က “ခင်ဗျာမှာ နောက်ဆုံးပေါ် အိမ်ပုံစံစာအုပ်မရှိဘူးလား” မေးလာ၊ ရှိတာပေါ့။ အများကြီးရှိတယ်။ အဲဒီ Home Buyer’s Guide စာအုပ်လေးငါးအုပ် ထုတ်ပြတော့ “ဒီအထဲက ပုံတွေကို ကော်ပီကူးလိုက်ရင် ရှယ်ပဲဗျ။ ဘာလို့လဲမကောင်းဘူးလား” သူက ပြောတယ်။ တေးဂီတသဘော ပြောရရင် “ကော်ပီသီချင်း” ရေးခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်။ ငါက ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်၊ ကိုယ်ပိုင်စာလုံးနဲ့ တေးဖွဲ့ချင်သူ။ “တခြားသူတွေလည်း ဒီလိုပဲကော်ပီတွေ လုပ်နေတာပဲဗျာ” လို့ စိတ်ပါအောင်လုပ်ချင်လာအောင် သူကပြော။ ဒါက ကမ္ဘာကျော် အာခီတက်လား။ မြန်မာကျော်အာခီတက်လား . . . မဟုတ်။ “မူပိုင်” ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေကိုရော ဘယ်သူတွေက တန်ဖိုး ထားလို့လည်း။
ထို့ကုမ္ပဏီ၏ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဆိုသူ အနှီ Client က “အာခီတက်” ဆိုတာ ဘာလဲသိဟန်မတူ။ ပုံဆွဲတဲ့ အင်ဂျင်နီယာပဲလို့ သူထင်ပုံရ၊ ခက်ပြီ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ရှင်းပြနေရင်လည်း စိတ်ဝင်စားမယ့်ပုံ မပေါ်။ အဓိကက အဲဒီထိုင်းအိမ်ပုံစံဓာတ်ပုံတွေကို ဗိသုကာ ဆွဲပုံများအဖြစ် အသွင်းပြောင်းမှုကို လုပ်ခြင်း မလုပ်ခြင်း။ လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ ငါအသပြာရတယ်။ သူကြိုက်တယ်။ ဒါ ဝမ်းရေး။ ဒီဇိုင်းညွှန့်ဝင်းလေး၊ အဲဒါ မိမိရဲ့စတီရီယို အာခီတက်ချာ (၁) ။
မိမိနဲ့ စတီရီယိုအာခီတက်ချာ (၂)
၁၉၈၉ ခုနှစ်လောက်က ဟောင်ကောင်ရောက်တော့ ဟောင်ကောင်မှာ လုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံလေး တစ်ခုပေါ့။ အဲ့ဒီမှာ သူငယ်ချင်း အာခီတက်တစ်ယောက်ရောက်နေတာ ကြာပြီ။ သူ့အလုပ်က လိုင်စင်ရ အာခီတက်ရဲ့ ရှဲဒိုးအာခီတက်၊ ညွှန့်ဝင်းလေးက လက်ထောက် ရှဲဒိုးအာခီတက်ပေါ့။ အိမ်ရာ (Apartment, Condominium) တွေရဲ့ ပန္နက်ပုံ (Plan) တွေကိုသူတို့ အာခီတက် ဆွဲပေး၊ မြန်မာရှဲဒိုးအာခီတက် နှစ်ယောက်က မျက်နှာစာဒီဇိုင်း(Facade design) ထုတ်ပေး။ တစ်မီတာအတွင်းအဝင်အထွက် ဒီဇိုင်းကွန့်မြုးနိုင်။ ကြိုက်ပြီဆိုရင် မျက်နှာစာ ဒီဇိုင်းနဲ့ဆီလျော်မယ့် ပန္နက်ပုံ သူတို့ပြန်ဆွဲ၊ အသုံး (Function) က ဟောင်ကောင်အာခီတက်၊ မျက်နှာစာ ဒီဇိုင်း (Form) ကမြန်မာအာခီတက်၊ အဲဒါမိမိရဲ့ စတီရီယို အာခီတက်ချာ (၂)
မိမိနဲ့စတီရီယို အာခီတက်ချာ (၃)
မြန်မာလူမျိုး တစ်ယောက်က အင်္ဂလိပ်လို မူရင်းအတိုင်းဆိုတဲ့ သဘော၊ တေးဂီတမှာတော့ စီမံမှု (Arangement) ကို အပြောင်းအလဲ(Variation) သီဆိုပုံရှိ။
ဒီသဘောမျိုး ဆောက်လုပ်ရေး နယ်ပယ်မှာရှိ၊ နိုင်ငံခြားအိမ် (သို့မဟုတ်)အဆောက်အအုံပုံစံကို ထပ်တူထပ်မျှ မိတ္တူကူးဆောက် ဗိသုကာပုံစံ မိတ္တူ၊ စတီရီယို အာခီတက်ချာ (၃)၊ မိမိဒါမျိုး မလုပ်ခဲ့။ မလုပ်၊ ဘယ်တော့မှလည်း လုပ်မှာမဟုတ်။ အနာဂတ် စတီရီယိုအာခီတက်ချာ
အသက်မွေးမှုပညာဆိုင်ရာ သိက္ခာ (Professional Ethic) မထိန်းရင်
ဗိသုကာပညာရှင်ကို ပညာကြေး ထိုက်ထိုက်တန်တန် မပေးရင်
“မူပိုင်”ဆိုတဲ့ ကိစ်္စကို တန်ဖိုးမထားရင်
ဗိသုကာ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲဖို့ လုံလောက်တဲ့ အချိန်မပေးရင် ပြောင်မြောက်တဲ့ ခေတ်ပြိုင် ဗိသုကာလက်ရာတွေ ပေါ်လာစရာ အကြောင်းမရှိဘူးလို့ စာရေးသူ ထင်မိပါတယ်။ အလားတူ အနာဂတ် ဗိသုကာ လက်ရာတွေမှာလည်း “စတီရီယို အာခီတက်ချာ”တွေ ပိုမို ရှင်သန်လာနိုင်ဖွယ် ရှိမည်လော . . . ။